မျိုးဆက် XXX - ထွက်ပေါ်လာသောအရွယ်ရောက်သူများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလက်ခံခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
comments: ဒေတာ 2007 ထံမှဖြစ်ပါသည်, သေးက9၏ 10 ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတွေ့ရှိခဲ့ (18-26 အသက်တစ်ဦးချင်းစီ) porn ကို အသုံးပြု. သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရာခိုင်နှုန်းငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေယနေ့အဘယ်အရာဖြစ်နိုင်သနည်း
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ် ဇန်နဝါရီလ 2008 23: 6-30,
ဂျေဆန်အက်စ်ကာရိုး ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်, Provo, Utah, [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]. လော်ရာအမ် Padilla-Walker က ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်, Provo, Utah လာရီဂျေနယ်လ်ဆင် ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်, Provo, Utah ချဒ်ဃ Olson ဘရစ်ဂ်ဟမ်လူငယ်တက္ကသိုလ်, Provo, Utah Carolyn McNamara Barry မေရီလန်းပြည်နယ်, Baltimore အတွက် Loyola ကောလိပ် Stephanie ဃ Madsen McDaniel ကောလိပ်, Westminster, မေရီလန်း
ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းလက်ခံမှု၏ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ထွန်းသစ်စလူကြီးများ (18-26 အသက်တစ်ဦးချင်းစီ) ၏စံတန်ဖိုး (nonclinical) လူဦးရေအတွင်းကိုအသုံးပြုပါ။ သင်တန်းသားများကို (813 အမျိုးသမီးတွေ 500 တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပါဝင်သည်; M အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားခြောက်လကောလိပ်က်ဘ်ဆိုက်များကနေစုဆောင်းအသက်အရွယ် = 20 နှစ်) ။ သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းသူတို့၏လက်ခံမှုနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အွန်လိုင်းမေးခွန်းအဖြစ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်လှုပ်ရှားမှု, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိသားစုဖွဲ့စည်းရေးတန်ဖိုးများကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
Results အမျိုးသမီးငယ်၏လူပျိုတို့နှင့်တစ်ဝက် (67%) ၏အကြမ်းဖျင်းသုံးပုံနှစ်ပုံ (49%) နီးပါး9ထဲက 10 (87%) လူပျိုတို့နှင့်သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါး (31%) သော်လည်း, ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကြောင်းသဘောတူထင်ရှား အမျိုးသမီးငယ်များ၏ညစ်ညမ်းသုံးပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။